“Ma Ogtahay Askari Jaahilaan amar ka Qaataaye”
Waxaan tacsi u dirayaa eheladii iyo qaraabadii marxuumiintii lagu xasuuqay Boosaaso. Waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu jannadii Fardowsa geeyo, ehelkoodiina samir iyo iimaan ka siiyo.
Waxaan kaloo dadka ehelkaa ku boorrinayaa inaysan ku dhicin godka iyo bohalaha uu qodayo cadowga dadkeenna iyo waxa u adeega. Markasta oo uu dhiillo maqlo, hogaamiyaha Puntland, wiil baa u dhasha. Haddii isagu dhagartaas lahaana kumaba sii jirto. Waxaan ka wadaa wuxuu gaaraa goolkiisii siyaasadeed. Sidii la iiga horreeyey waxa laga jeestaa isaga oo iyagaa isku jeesta. Seddexda qabiil oo Boosaaso ugu badan mid nin baa u keenay isagoo wada, labadii kalana waa kuwaas hadda la isku soofeynayo. Marka hadday dadkii C/hi ka jeestaan oo iyagu isku jeestaan yaa C/hi dadka ka jeedin?
Waxaa ceeb ah hadday arrintaasi qabiil la xiriirto. Waa tii Khaliif Allaha u naxariistee lahaa:
Shabeelkii intuu maqasha dhalay meel dayacan seexshay
Ee geelu marayee haddana ari mag weydiistay
Is-mutuxinta maaggaaga waa lagu maleeyaaye
Ninkii nin ku dilaya dhul la boobay ama dhac muu C/hi iyo mooryaantiisa aado? Magaaladii oo dhan isagaa dhacay. Isagaa dhowr jeer xilkii ka qaaday Marxuum Seyruuq. Waxaan shaki lahayn in dadkii ficilkaas geystay ay yihiin dulli, xuunsho iyo dugaagga yaryar maxaa yeelay iyagaa markii uu libaaxu wax disho oo ka tago uga dambeeya. Waxaa taas daliil u ah: C/hi markuu Faarax Dheere iyo Suldaan Hurre dilayey, dadkuu usoo diray, madaxa ma soo qarsan ee iyagoo caadi ah oo loo wada jeedo bay dileen laakiin kuwa dulliga ah waa kuwaas maryaha isku dadaya.
Hal-abuurkii yiri: ma ogtahay askari jaahilaan amar ka qaataaye warkii wuu dhammeeyey maxaa yeelay askari oo dhan ma xusin ee jahli buu xusay ilayn askarta qaarkood waa kuwa ugu mudan in laga amar qaato sida markuu yahay gaarhaye iyo dal-jir sax ah. Waad aragteen in waddamada reer Galbeedka ay ka dhacdo in madaxweyne loo doorto nin askari soo ahaa. Mararka qaarkood way ku faanaan inay usoo dagaallameen danta waddankaas xitaa haddii waddankiisu xaq-darro ku socday.
Jeneraal Daa’uud Allaha u naxariisto iyo Maxamed Abshir waxay ahaayeen askar. Sidoo kalana C/hi Yuusuf waa askari!
Hal-abuurku wuxuu diirada saaray jahliga waana wax laga ducaysto. Labadii jeer oo Jibuuti wax lagu soo dhisay wax askari ah waa laga fogaaday oo midi Cali Mahdi oo makhaayadle ah buu ahaa midna C/Qaasim oo maamul iyo wasaarado soo maray.
Suurtogal ma tahay inaynu askari jaahil ah, amar iyo cod aan leennahay madaxweyne ugu doorano?! Taasi ma ahan wax xitaa hal-abuurradu ay awileen/odoroseen/saadaaliyeen.
Waxaa la ii sheegay in beydkaas maansadaa uu ka mid ahaa silsilad furan oo la sheegay in hal-abuurada laga rabay inuu qofba wax ku darsado. Waxaa la sheegay in midi yiri:
Ma ogtahay anfacadaan cunaa ma laha iidaane
Mid kale waxaa la sheegay:
Ma ogtahay askari jaahilaan amar ka qaataaye.
Mid kale wuxuu yiri:
Ma ogtahay amuurta oo dhami odayga weeyaane.
Inuu hal hal-abuur tirshayna wey dhici kartaa. Horta waxu haddaysan ahayn diin oo aan xalaal iyo xaaraan laga hadlayn waa la soo geli karaa. Maxaa Mbaghati la oran lahaa haddii silsiladaas la fasaxo?
Ma ogtahay ergada ay xusheen malaha iimaanne
Hadda waxaa nasoo gaaraya in odayaashii dhaqanka cuntadii loo diiday iyadoo la leeyahay lacag looma hayo. Maxaa la dhihi karaa?
Ma ogtahay oontii ka jare odayadeeniiye.
C/hi oo askari ah baa raba inuu dadkeenna madaxa ka wasakheeyo markuu yiri: raali kama ahi in xilka la ii kordhiyo! Wuxuu isleeyahay 31-da Juulaay/Luuliyo baa adiga madaxweyne lagaa dhigayaa marka “dhallaanka dhulka jooga dhurwaayoo qaado” micnaha Puntland iyo sheekadeed dan kama lihi laakiin reer Puntland xisaabta maku darsadeen haddii C/hi waayo xilalkaas wuxuu samayn? Ma iska tagayaa? Mise qaar iyaga ka mid ah buu ku tegin?
Wararkii Toogashada Guddoomiyihii Boosaaso
iyoTaliyiihii Ciidanka Canshuuraha Dowlada Hoose ee Kontaroolka Boosaaso iyo sawiro laga soo qaaday gaarigii lagu dhex toogtey marxuumiinta... Guji